Abakhuseli bekhusi be-iphone 6s bangoku abanakulunga kwi-iphone 7
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Abakhuseli bekhusi be-iPhone 6s ngoku abanakulunga kwi-iPhone 7
Abakhuseli bekhusi be-iPhone 6s ngoku abanakulunga kwi-iPhone 7
Njengoko uvile iApple ibhengeza eqongeni kwiveki ephelileyo, kwaye njengoko ubona kumzobo wayo we-iPhone 7 apha, iifowuni ezintsha ezivela eCupertino ngoku zithumela ngezithethi zestereo. Ngelixa igama & iiapos; stereo 'ezisetyenziselwa izixhobo ezincinci ezinokuthi zixoxwe, ukumiliselwa kwesithethi esitsha kwenza isandi siphume kuninzi lwazo, endaweni yesithethi esinye njengazo zonke ii-iPhones ngaphambi kwalo nyaka kunye nohlobo lweapos.
Umahluko obonakalayo, nangona kunjalo, kukuba iApple isebenzisa igama elithi & apos; isithethi sestereo, 'xa yalatha kwilaphu lendlebe phezulu, kodwa & iiapos; izithethi zestereo' kwisininzi xa idayagramu ibonisa ezantsi, kungabikho zandi zimbini blasters ezantsi, kwaye enye phezulu. Eyona nto iphambili ikwasetyenziswa njengendlebe xa uthetha, njengakwifowuni ezinesithethi esixhotyiswe apho ngaphandle.
Kwaye apha sifika kwinxalenye enomdla. Ukuvelisa esona sandi sihle ngesithuba esikhoyo, iApple ibonakala ngathi ayibonakalanga njengesithethi esiphindwe kabini ezantsi, kodwa ikwandisile isikhewu sendlebe kunye nothotho lokukhusela phezulu. I-apos ayinkulu ngomda omkhulu, kodwa ibonakala inkulu ngokwaneleyo kunaleyo yendlebe kwi-iPhone 6 / 6s ukugunyazisa iseti entsha yesikhuseli.
I-Yep, ibali elide elifutshane, thina kunye neapos siza kwenza ujikelezo lweyona iphambili ye-7 kunye ne-7 Plus yabakhuseli bekhusi kwakamsinya nje xa umgangatho ufika kwimarike ngemihlambi, njengoko kubonakala ngathi abenzi bokufikelela kuya kufuneka babuyele kwibhodi yokuzoba zegilasi okanye iifilimu zeplastiki ozifunayo ukubeka ngaphezulu kwescreen sakho se-iPhone 7 ukuthintela ukukrwela okanye iintanda ukuba zingaveli apho.
I-Apple iPhone 7
5.44 x 2.64 x 0.28 intshi
I-Apple iPhone 6s
I-5.04 oz (143 g)
I-Apple iPhone 7 Plus
Thelekisa ezi kunye nezinye iifowuni usebenzisa isixhobo soThelekiso soBungakanani.
Inqaku lomnyele lomnyele we-20
Isamsung kunye neeapos ezisemthethweni zeGlass Qaphela i-9 S yeepeni zibiza ixabiso eliphantsi kunakuqala kwimibala emithathu
Idili: Ukuvulwa kwe-Samsung Galaxy S7 esebenzayo ngoku ixabisa i-499.99 yeedola